SC-UA7GS Home Theatre System & Surround Sound - Panasonic
Wireless Speaker SC-UA7GS
စတိုင်ကျလှပသော ထောင့်ကွေးပုံစံတစ်ခုနှင့် မင်သက်သွားလောက်စေသော အသံဖြင့် URBAN AUDIO ကို ခေတ်မီဆန်းပြားသောပုံစံဖြင့် ပြီးပြည့်စုံမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန်အတွက် အံ့မခန်းဖွယ်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် အပြည့်အဝ ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဖန်တီးထားပါသည်။ ဂီတသံစဉ်တိုင်းမှ စိတ်ခံစားချက်လှိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို ခံစားဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ သင်နှင့် သင်ချစ်ရသူတွေအတွက် ဘဝထဲက သင့်တို့ရဲ့ ဂီတကို လုံးဝပြောင်းလဲသွားတဲ့ အသွင်ပုံစံနဲ့ ခံစားရမယ့်အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသော အပိုအလိုမရှိတဲ့ တေးဂီတနားဆင်မှု အတွေ့အကြုံ- ထူးကဲတဲ့ အသံပါဝါကို သင့်ဘဝထဲသို့ ယူဆောင်လာဖို့ URBAN AUDIO ကို ခွင့်ပြုလိုက်ပါ
လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ စပီကာတစ်လုံးထဲဆီက အင်အားပြည့်ဝတဲ့ အသံ
အခန်းတစ်ခုလုံး ဟိန်းထွက်သွားစေမယ့် အသံ
အသံအား အပြည့်အဝကို ရရှိနိုင်ရန် UA7 တွင် 6cm တွီတာစပီကာလေးလုံး၊ 8cm ပုံမှန်ဝူဖာလေးလုံးနှင့် 16cm စူပါဝူဖာနှစ်လုံး၊ စုစုပေါင်း စပီကာ 10 လုံးကို ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသည်။ တုန်ခါမှု မရှိစေရန်နှင့် ပျက်ယွင်းမှုမရှိသော အသံကို ထုတ်ပေးရန် 16cm ဝူဖာများကို ကျောချင်းကပ်တပ်ဆင်ထားသည်။ ပုံမှန်ဝူဖာများနှင့် တွီတာစပီကာများကို ဘေးဘက်ခြမ်းနေရာသုံးနေရာတွင် တပ်ဆင်ထားသည့်အတွက် သင် ဘယ်နေရာမှာရှိနေနေ 180-ဒီဂရီ အခန်းတွင်း လွင့်ပျံ့နေသော အသံကို ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပါတီပွဲကြီးတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်သော အားကောင်းသည့် ဘယ်သံနှင့် ဟိန်းသံတို့ကို ပြိုင်ဘက်ကင်းသော Bass Reflex စနစ်ဖြင့် ထပ်မံ၍ အားဖြည့်ပေးထားသည်။ တစ်မူထူးခြားသည့် ပေါ့တ်နည်းပညာက ဝူဖာနောက်မှထွက်လာသော အော်ဒီယိုဟိန်းသံကို ဆုံးရှုံးသွားစေခြင်းမရှိဘဲ အသံကို ရှေ့သို့တွန်းပို့ပေးသည်။ ယင်းက အင်အားပြင်းသော လေငလျင်လှုပ်ခတ်သကဲ့သို့ အတွေ့အကြုံတစ်ခု ထုတ်ပေးရန် ဘယ်သံကို ထပ်မံ၍ ချဲ့ပေးသည်။
ခြောက်မြှောင့်ပုံစံ သေတ္တာဒီဇိုင်းသည် ကျယ်ပြန့်နှံ့စပ်သော လားရာဆီသို့ အင်အားပြည့်ဝသော အသံကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့်အပြင် တပ်ဆင်ရန် သီးခြားနေရာတစ်ခုကိုသာ လိုအပ်သည်။ ကြည်လင်ပီသသော အသံလှိုင်းစွမ်းအင် ပါဝင်သည့်အပြင် ၎င်းတွင် စတိုင်ကျလှပသော အလယ်ဗဟိုရှိ အပြာရောင်မီးအလင်းရောင်နှင့်အတူ ထိပ်ဘက်မျက်နှာပြင်တွင်ရှိသော မှန်ပေါ်တွင် အဖြူရောင် တောက်ပလင်းလက်နေသော စက်ဝိုင်းပုံ ထိတွေ့မှု အာရုံခံခလုတ်တစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် ကြည့်လိုက်သည်နှင့် ပုံမှန်တန်ဖိုးထက်မြင့်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အသွင်ဆောင်စေရန် တစ်ခုချင်းစီကို အနုစိတ်ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားသည်။
သူငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်း သီချင်းတွေကို မျှဝေလိုက်ပါ
Panasonic MAX Juke အက်ပ်
Panasonic MAX Juke အက်ပ်က ပါတီကို နောက်တစ်ဆင့်မြှင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ အက်ပ်ကို အသုံးပြုပြီး သင်၏စမတ်ဖုန်းမှနေ၍ ၎င်း၏ အတွင်းပိုင်း မမ်မိုရီ 4GB ဆီသို့ အသံဖိုင်မျိုးစုံကို လွှဲပြောင်းပေးပို့လိုက်ပါ- သီချင်းအပုဒ်ရေ 1,000 နီးပါးကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ထို့ပြင် UA7 တွင် USB ပေါက်နှစ်ခု ပါသည့်အတွက် သီချင်းကို တိုက်ရိုက်ဖွင့်နိုင်သည်သာမက မျှလည်းမျှဝေနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ထားသော သီချင်းဖွင့်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်က သီချင်းခေါင်းစဉ်များကို တောင်းဆိုလိုက်ရုံဖြင့် ပါတီပွဲကို အရှိန်မပျက်စေဘဲ ဖွင့်နိုင်စေသည်။
သင်၏ ပါတီပွဲကို အစွမ်းကုန်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ
စက်တွင်း ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အသံညှိခလုတ်ကို ဘက်စုံသုံးနိုင်သည့်အတွက် သင်သည် ရော့ခ်ဂီတ သို့မဟုတ် တောင်အမေရိက ဆယ်လ်ဆာအကမှသည် ဘောလုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအထိ အသံအမျိုးမျိုးကို အကောင်းဆုံး နားဆင်ခံစားနိုင်သည်။ အော့ပ်တီကယ်ကြိုး ပလတ်ပေါက်ကိုသုံးပြီး TV နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ အသစ်ပေါင်းထည့်ထားသော အသံပျံ့နှံ့မှုမုဒ်ဖြင့် သင့် TV အသံသည် ဖန်သားပြင်မှ လာသည့်အသံအတိုင်းပင် ပျံ့နှံ့သွားစေသည်။ ထို့ပြင် မိုက်ခရိုဖုန်းကို ပလတ်ထိုးလိုက်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ပဲ့တင်သံ သို့မဟုတ် ကီးထိန်းချုပ်မှုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ချက်6မျိုးဖြင့် အိမ်တွင်းကာရာအိုကေသီဆိုရသည့် အတွေ့အကြုံကိုလည်း နှစ်သက်ခံစားနိုင်သည်။
4 Woofers and4Tweeters / AIRQUAKE BASS
Lighting Touch Sensor Buttons / Illumination
UA7 Video UA7 Images
Panasonic URBAN AUDIO SC-UA7
Panasonic URBAN AUDIO SC-UA7 is redesigned withastylish new twist and stunning features. It sends waves of emotion from each musical note, taking sound enjoyment toawhole new level. Let URBAN AUDIO bringarich new resonance to your life with an elegant musical experience.